आइफा अवार्ड कति उत्पादक ? | चितवन पोष्ट
आइफा अवार्ड कति उत्पादक ?
सन्दर्भ छ आइफा अवार्डको । जुन हाम्रा लागि काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर उक्तिजस्तै हो । हाम्रो सरकार विनामतलबका विषयहरुलाई अनावश्यकरुपमा उच्च मह¤व दिन्छ र विवादको दुष्चक्रमा फँस्छ । प्रतिपक्षीलाई के निहुँ पाऊँ र कनिका बुक्याऊँ भइरहेको असाधारण परिस्थिति छ । हुन पनि चाहिनेभन्दा ज्यादा मह¤व दिँदा विवादमा परिन्छ भन्ने कुरामा यस सरकारले होसियारी अपनाउनुपर्ने स्थिति छ । एक कम्युनिस्टहरु धर्मनिरपेक्षको नाउँमा इसाई, इस्लाम धर्महरुलाई बढवा दिन्छन् भन्ने अभियोग लाग्ने गर्छ, कदाचित् यो सत्य हो कि भन्ने यदाकदाको परिघटनाबाट झल्केको आभास हुन्छ । हुन त, यसअघि नै आयोजित एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि गएका हुन्, तर त्यो विवादमा आएन । तर, त्यही संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा वर्तमान प्रधानमन्त्री जाँदा यसलाई विवादको विषय बनाइयो ।
यसो हुनुमा अघि भनिएझैँ धर्मका कोणबाट कम्युनिस्टलाई हेर्ने र कम्युनिस्ट नेतृत्वले गर्ने व्यवहार नै मुख्य कारण हो भन्ने लाग्छ । एउटा हिन्दु गैरसरकारी संस्थाप्रति गर्ने व्यवहार र अन्य धार्मिक संस्थाप्रति गर्ने व्यवहारमा भिन्नता आउनु कदाचित् उपयुक्त होइन । यद्यपि, झन्डै नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी नै ऊँकार परिवार भएको मुलुकका नागरिकलाई अनेकौँ प्रलोभन देखाएर इसाईकरण गरी युद्धस्तरमा खुम्च्याउने कार्य गरिएको परिस्थितिमा हिन्दुहरुको मनोबल कमजोर र दुःखित भइरहेको स्थिति छ । यसलाई सरकारले तटस्थ भई कार्य गर्न सक्नुपर्छ ।
अब विषयतिर प्रवेश गरौँ । भुल्नै नहुने कुरा के हो भने यो सरकार यसअघि बनेका सामान्य सरकारजस्तो होइन । त्यसै पनि गरिब निमुखा, सर्वहारा वर्गदेखि मध्यम वर्गीय जनताका मतादेशबाट बनेको सरकार हो । यसैले, सरकारले यिनको मतादेशको सम्मान गर्दै अधिकतमरुपमा आपूmलाई यिनैको सेवा र सुश्रूषामा समर्पित गर्नुपर्छ । सारा साधनस्रोत, शक्ति र सामथ्र्य पनि यिनैको आर्थिक, सामाजिक आदि स्थितिलाई उकास्नकै निम्ति केन्द्रित हुनुपर्छ । यिनको रोग, भोग, शोक र दुःख–दर्द हरणका निम्ति हुनुपर्छ ।
के त्यसो हो भने यो सरकार धनी र वैभवशालीहरुको होइन भन्ने प्रश्न आउँछ । निश्चय नै तिनको पनि हो, तर उनीहरुले राणाकालमा, पञ्चायतकालमा, प्रजातन्त्र र प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि पनि सधैँ उच्च प्राथमिकता पाइरहे । धनी झन् धनी भए । गाउँका ठालुले गरिब निमुखालाई शोषण गरेर धनी भए र सहर पसे । प्राकृतिक विपत्तिमा परेका गाउँलेका नाउँमा आएको राहत खाए । सहरमा बस्नेले सहरकै विकासको बजेट झ्वाम पारेर धनी र वैभवशाली भए ।
अब त कम से कम कम्युनिस्ट पार्टीको एकलौटी सरकार बन्दा पनि तिनको दुःख हरणका लागि नभई तिनैको मुखमा अगुल्टो कोच्ने गरी काम गर्नु किमार्थ स्तुत्य मान्न सकिन्न । उहिले शृंगारिक साहित्य, गीत÷संगीत र फिल्महरुलाई भोगवादी भन्दै जलाउँदै हिँड्ने तर अहिले त्यसैको स्तुति गायन गर्ने प्रवृत्ति किमार्थ शोभनीय देखिन्न ।
यसको अर्थ नेपालमा इन्टरनेसनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी (आइफा)को अवार्ड कार्यक्रम हुनुहुँदैन भन्ने आशय कदापि हुँदै होइन, तथापि सरकारले राज्यको ढुकुटी रित्याएर गर्ने यस्ता कार्यक्रमले के प्रतिफल दिन्छ ? भन्नेचाहिँ मुख्य सवाल हो । कुनै देशको फिल्म उद्योगले नेपालमा अवार्ड कार्यक्रम गर्न चाहेमा त्यसका निम्ति सुरक्षादेखि कार्यक्रम स्थलको प्रबन्ध गर्नु सरकारको दायित्व बन्दछ । त्यसो गर्नु नैतिक दायित्व पनि हो । तर, कुनै देशको मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमकै लागि देशको ढुकुटी रित्याउने कार्य शोभनीय देखिन्न । त्यसमा पनि भारतीय फिल्म उद्योगका प्रायः कलाकार नेपालको राष्ट्रियताप्रति खिल्ली उडाउँछन् ।
ऋतिक रोशनले नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतालाई लिएर गरेको टिप्पणी हाम्रो मानसटलमा अझै गुञ्जिरहेकै छ । उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर भएको हंगामा र त्यसले भएको मानवीय तथा राष्ट्रिय भौतिक क्षति अझै चित्र बनेर नाचिरहेछ । कतिपय भारतीय चलचित्रमा नेपाललाई सुन्दर, शान्त र सांस्कृतिक सौन्दर्यले विभूषित मुलुकको रुपमा भन्दा नकारात्मक कार्यका लागि उर्वरभूमि रहेको मुलुकका रुपमा चिनाउने प्रयत्न गरिएको हुन्छ । खासगरी लागू पदार्थ, चोरीडकैती, हातहतियार र अन्डर वल्र्डको ट्रान्जिट पोइन्ट रहेको मुलुकका रुपमा चित्रण गर्नु हाम्रो मुलुकका लागि सुखद विषय कदापि होइन ।
हो, यदाकदा यस्ता घटनाहरु पनि फेला पर्दछन् । यस्तो अवैध कार्य अन्य मुलुकमा पनि नहुने होइनन् । अपवादमा हुन्छन् नै, यसैले त्यहाँ पनि सुरक्षा व्यवस्थाका साथै कारागार बनाइएको हुन्छ । तर, नेपाललाई हेप्न सकिने र जे बोले पनि नेपालीले प्रतिरोध गर्न नसक्ने हुनाले नै जस्ता पनि कार्यका निम्ति दुस्साहस गरिँदै आइएको छ । यसैले, यदाकदा नेपाली चलचित्र मन्दिरहरुमा भारतीय चलचित्र प्रतिबन्धित हुने गरेका छन् । भारतीय चलचित्रकै कारण नेपाली चलचित्र उद्योग दुरवस्थामा पुगिरहेछ । यद्यपि, दुरवस्थामा पुग्नुको कारण स्तरीयता, विश्वसनीयता र कलात्मकतामा निखार आउन नसकेर पनि हुनसक्छ, तथापि नेपाली चलचित्र उद्योगका निम्ति भारतीय चलचित्रहरु प्रत्युत्पादक नै बन्ने गरेका छन् ।
अर्को एउटा तर्क पनि आउँछ । भारतीय कलाकारिताबाट नेपाली कलाकारहरु पनि प्रभावित छन् । उनीहरु एकलव्यले द्रोणाचार्यलाई गुरू बनाएजसरी नै गुरू बनाएर केही न केही सिकिरहेकै हुन्छन् भन्ने तर्क पनि आउन सक्छ । हो, सिकिरहेकै हुन्छन् नै जसरी भारतीय कलाकारहरुले हलिउडबाट दिनहुँ सिकिरहेका हुन्छन् त्यसरी नै । तर, सायद् हलिउडका कलाकारले बलिउडका कलाकारसँग गुरूदक्षिणा लिँदैनन्, तर भारतीय (बलिउडका) कलाकारले अनेकौँ बहानामा द्रोणाचार्यले झैँ यहाँका कलाकारहरुसँग गुरूदक्षिणा लिइरहेकै हुन्छन् ।
कुनै देशका खेलकुद विकास विभाग वा क्लबहरुले नेपालमा क्रिकेट, फुटबल, भलिबलजस्ता कार्यक्रमहरु गर्न चाहेमा तिनलाई क्रीडास्थल र सुरक्षा प्रबन्ध गर्नुलाई अनुचित मान्न सकिन्न । तर, अनुदान र ऋण खोजेर ल्याएको आर्थिक बजेटलाई तिनका कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्न खर्च गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्न । हो, नेपालका क्लबले अन्तर्राष्ट्रिय खेल आयोजना गर्छन् र त्यसको नाफा भए कमाउँछन्, घाटा भए तिनैले बेहोर्छन् । त्यसमा सरकार निरपेक्ष रहन्छ र रहने गरेको पनि छ ।
यसरी नै नेपाल चलचित्र बोर्डले आधिकारिकरुपमा टिकट बेचेर सारा खर्चबर्च जुटाउँछ भने त्यसमा सरकारले समन्वय गरिदिनुपर्छ । यो सहज र सरल उपाय पनि हुनसक्छ । तथापि, नेपालमा दिनानुदिन हिन्दी भाषा र संस्कृतिको प्रभाव बढ्यो । हिन्दीलाई नेपालको कार्यालयीय भाषा बनाउनुपर्छ भन्ने माग आइरहेको सन्दर्भमा यसले ती माग गरिरहेका पक्षलाई बल दिने र प्रत्यक्ष÷परोक्षरुपमा यसले प्रभाव पार्ने पनि हुनसक्छ । बाघ कराउने र बाख्रा हराउने घटनालाई नै सत्य मान्नु बुद्धिमानी होइन, तथापि यस्ता विषयहरुप्रति पनि संवेदनशीलता अपनाउनु अपेक्षित छ ।
असार १७ गते प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले नेपालको सांस्कृतिक स्वत्व र राष्ट्रिय हितप्रतिकूल असर पार्ने भएका कारण आइफा अवार्ड रोक्न निर्देशन दिएको छ । उसको नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र अस्मितामाथि पर्ने प्रतिकूल असरलाई लिएर गरिएको पहल एककोणबाट हेर्दा अतिशयोक्तिपूर्ण लाग्छ ।
यसर्थ, अब सरकारले यसलाई सुरक्षित अवतरण गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु जरूरी छ । कुनै बेला प्रम ओलीले टनकपुर सन्धि गरे नेपाललाई वार्षिकरुपमा अरबौँ रकम फाइदा हुन्छ भनेर दिएको अनावश्यक अभिव्यक्तिजस्तै सरकारका प्रवक्ताले दिएको अभिव्यक्ति हास्यास्पद प्रतीत हुन्छ । सरकारले पक्षमा बोलेर राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन गर्नुभन्दा बरू सहजीकरण मात्र गरिदिने सर्तमा कार्यक्रम गर्नु उपयुक्त हुनसक्छ । यसले पर्यटनलाई संवद्र्धन गर्ने तर्कमा आंशिक दम भए पनि भारतीय नागरिक आएर नेपालको पर्यटनमा प्रवद्र्धन हुने कुरा सरकार र आयोजकहरुको दिवास्वप्नबाहेक केही होइन । बरू, कार्यक्रम होस् तर सरकारी तडकभडक र फोटो सेसनकै लागि नहोस् । संयम, सन्तुलन र बुद्धिमत्तापूर्ण सुझबुझका साथ होस् । यसले नेपालमा भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय जगत्का कलाप्रेमीहरुको नेपालप्रति हेर्ने दृष्टि बदलियोस् ।